5 Best Natural ebube nke Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Best Natural ebube nke Europe
Naturedị Europe na ọdịdị ala kpaliri akụkọ ifo. Nnukwu ala ahụ bụ ebe obibi dị ịtụnanya hiking ụzọ ụkwụ nke ahụ na-eduga na ụfọdụ n’ime ebube ndị kachasị ịtụnanya n’ụwa. Ọgba ndị a ma ama na Họngarị, a Grand Canyon nwere mmiri pọmig na France, ice-palaces in Austria, na ugwu eji udi piramidi na Italy, bụ 5 nke kachasị mma ebube nke Europe.
Ihe ịtụnanya ndị a sitere n'okike ga-ewepụ mmụọ gị, ma nye usoro dị ịtụnanya maka ezumike kachasị mma na Europe. Ma ị nwere mmasị na ịnyagharị ma ọ bụ were ụgbọ ala USB, ndị a 5 ọrụ ebube bụ nanị a kwesịrị-nleta ọ bụla njem na Europe, ọ dịkarịa ala otu oge ná ndụ gị.
1. Best Natural ebube nke Europe: Eisriesenwelt, Austria
Might nwere ike icheta Salzburg site na Theda Egwu na ụmụ Von Trapp na-abụku ugwu. ma, n'okpuru ugwu Hochkogel, zoro n'ọgba kacha ibu na Europe. Eisriesnwelt ice ọgba Austria bụ otu n'ime ihe ịtụnanya dị n'okike Europe. Karịsịa ihe nile, Ihe pụtara ìhè na mita 3000o anyị bụ nnukwu obí ice, Eispalast.
Ihe a sitere n'okike bụ ọgba ice kacha ibu n'ụwa, ọ bụkwa site na ice ka ọ dị n’okpuru lava ma ọ bụ limestone dị n’okpuru ala ka emepụtara ya.
Kedụ ka m ga-esi banye n'ọgba ice nke Eisriesnwelt?
N'ụzọ na-akpali mmasị n'ọgba 40km a bụ ụgbọ oloko na-aga Salzburg, ụgbọ oloko na-ahapụ kwa elekere. Na mgbakwunye na Werfen, e nwere ihe a 15 Obere minit na-agba ọsọ n'ọgba ahụ. Ọzọkwa, ọtụtụ njem nleta ka Germany, ịchọpụtabeghị ihe ịtụnanya a, yabụ ị nwere ike ịbụ otu n’ime ndị ọrụ nchọpụta pụrụ iche. Could nwere ike ịme njem ruru 4 ma ọ bụ 3 njem nke izu ike na iji ụgbọ ala USB na-agba.
2. Best Natural ebube nke Europe: Verdon Gorge, France
Akwa kaniyon nke France gbasara ruo na ndịda mpaghara Provence. Nkume okwute na okwute, mee maka mpaghara dị egwu maka ọmarịcha ọdọ mmiri a mara mma. Ya mere, aha ihe ịtụnanya a "Gorges du Verdon" pụtara Gorges nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, na French.
This amazing lake in Provence is perfect for summer swimming and chilling, yana paradaịs a na-egwu egwu. Enwere 1500 ụzọ maka ndị na-arị ugwu na-anụ ọkụ n'obi chọrọ iji nwee mmasị na ihe ịtụnanya Europe a site n'elu. Ya mere, ị họrọ ma ọ bụrụ naanị chọrọ ịsa ahụ na anyanwụ n'ime ụgbọ mmiri, ma ọ bụ chọpụta na ụkwụ.
Kedụ ka m ga - esi nweta Gorges Du Verdon?
Obodo kacha dịrị nso bụ Moustiers-Sainte-Marie, na i nwere ike iru ebe ụgbọ oloko si Paris. Gagazie banye n'ọnụ ụzọ àkwà mmiri Pont du Galettes, ịbanye n'okike nke a.
3. Best Natural ebube nke Europe: Matterhorn, Italy
Monte Cervino na Northern Italy bụ 4,478 mita n'elu oké osimiri dị. Na mgbakwunye, Matterhorn bụ onye ama ama maka ọdịdị pyramid ya zuru oke. Ekepụtara Matterhorn ahụ mgbe ala Africa na Europe jikọtara ibe ha. N'ihi nsonaazụ nke ala a, Oké nkume ahụ hụrụ ụzọ ya.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ahụmịhe nke kwesịrị ncheta na Matterhorn, nọrọ na ime ulo nke di n'ugwu a. The ice na snow Igwe na-anabata ndị njem abalị a agaghị echefu echefu. Ọ bụrụ na ị na-atụ egwu oyi, ihe ọ drinkụ drinkụ mmanya n’akụkụ ụlọ mmanya ga-eme ka ị kporo ọkụ ka ị na-enwe mmasị n’ugwu mara mma n’abalị jupụtara na kpakpando.
Olee Otú M Ga-esi Na Matterhorn?
Ihe ịtụnanya a nke eke bụ naanị ebe mbido njem gị dị ịtụnanya. Nwere ike ịga njem Matterhorn glacier site ụgbọ okporo ígwè njem nke Zermatt. N’ọdụ ụgbọ oloko kacha elu na Europe, ị nwere ike ịmasị ihe nkiri 360º nke ºtali, Switzerland, na France. Nke a pụtara na ị nwere ike nweta ihe osise zuru oke site n'akụkụ ọ bụla na Mmiri, n'oge okpomọkụ, ma ọ bụ nke ekpuchiri snow.
Ọgba ndị Aggtelek bụ ihe ịtụnanya sitere n'okike na Europe. Aha a na-adịghị ahụkebe pụtara 'mmiri na-agbapụta' nke sitere na usoro okike sitere na mmiri na-atasị na nkume. N'ihi ya, isi mmalite maka ọdịdị ndị mara mma na nnukwu ọgba dị na Aggtelek National park.
Ọgba mmiri Baradla Domica bụ usoro olulu mmiri dị kilomita 25 n'ogologo n'etiti Hungary na Slovakia. N'ihi ya, ọ bụkwa a UNESCO World Heritage saịtị.
Kedu ka m ga-esi banye na Baradla Domica Caves?
Aggtelek ọgba dị awa anọ ụgbọ okporo ígwè na njem si Budapest na mgbanwe. Ya mere, ma ọ bụrụ na ị na- na-eme atụmatụ njem ụbọchị si Budapest, ọ nwere ike ịbụ ntakịrị ihe.
5. Best Natural ebube nke Europe: The Black Forest, Germany
Ama ama maka osisi omimi ya na okoko osisi, na Black ọhịa na Germany bụ ihe ịtụnanya sitere n'okike nke Europe. Ugwu a mara mma na Baden-Wurttemberg emeela ka ọtụtụ akụkọ ifo, dị ka akụkọ Grimm. Nke a bụ ebe ị ga-esi na Baden-Baden spa town, baa n’oké ọhịa nke akụkọ ifo na kọkọlkọ mara mma.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na njem, Triberg Falls, na-echere njem na-aga n'oké ọhịa. Greatzọ ọzọ dị mma iji mee nchọpụta ihe ịtụnanya a dị mma na Germany bụ iji nduzi na-aga n'ihi na ihe ikpeazụ ị chọrọ bụ furu efu n'ala ndị nwere oke ọhịa..
Na ngwụcha, ndị a 5 kacha mma eke dị ebube nke Europe bụ ụwa niile kacha omimi. Ya mere, ị nwere ike maa inyocha Europe dị ka a njem nleta na-eme a na-ewu ewu ụzọ nlegharị anya, ma ọ bụ i nwere ike ịchọpụta ma hụ n’onwe gị ala ndị mara mma ma na-adọrọ adọrọ nke Europe. kasị, mkpa, ihe ịtụnanya ndị a niile dị n'ụdị ụgbọ oloko na ụzọ ọzọ, site na etiti obodo dị na Europe.
ebe a na Save A Train, we will be happy to help you find how to get by train to any of these natural wonders.
You chọrọ Embed anyị blog post “5 Best Natural ebube Of Europe” jidesie gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-natural-wonders-europe%2F%3Flang%3Dig የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)